တရုတ်အလှကုန်ပစ္စည်း GSH l-Glutathione / lglutathione အမှုန့်လျှော့စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ဂွမ်လန်း
အလှကုန်ပစ္စည်း GSH l-Glutathione / lglutathione အမှုန့် glutathione အမှုန့်များလျှော့ချပေးသောအသားအရေ
ကုန်ပစ္စည်းအမည် L-glutathione လျှော့ချ
အခြားအမည်များ - l-glutathione
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု ၉၉% min
Glutathione (GSH) ကို Reduced ဟုခေါ်သည် glutathioneသို့မဟုတ် L-GlutathioneReduced၊ အပင်များ၊ သတ္တဝါများ၊ မှိုများနှင့်အချို့သောဘက်တီးရီးယားများနှင့် Archaea တို့တွင်ဖြူကြည်လင်သောအမှုန့်များတွင်အရေးပါသောဓါတ်တိုးပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဒါဟာ glutamate ဘေးထွက်ကွင်းဆက်၏ carboxyl အုပ်စုနှင့် cysteine ​​၏ amine အုပ်စုအကြား gamma peptide ချိတ်ဆက်နှင့်အတူ atripeptide သည်နှင့် cysteine ​​၏ carboxyl အုပ်စုတစ်စုသည် glycine နှင့်ပုံမှန် peptide ချိတ်ဆက်မှုဖြင့်တွဲဖက်ထားသည်။ တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်ပတ်ပတ်လည်5မီလီမီတာ။ Glutathione သည် cytoplasmicproteins အတွင်းရှိ disulfide bonds များကိုအီလက်ထရွန်အလှူရှင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် cysteines သို့လျှော့ချသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာglutathione ၎င်းကိုအောက်စီဂျင်ပုံစံဖြစ်သော glutathione disulfide (GSSG) သို့လည်းပြောင်းလဲသည် L-glutathione။
ခြောက်သွေ့ခြင်းမှဆုံးရှုံးမှု (၃၅ နာရီတွင် ၃ နာရီ) .50.5%
L-glutathione ဓာတ်တိုး ≤1.5%
စာမေးပွဲ (အခြေခံအခြောက်) ၉၁.၀% မှ ၁၀၁.၀% သို့
2. အကျိတ်ကိုကုသပါ။ ဓါတုဆေးသွင်းကုသခြင်းနှင့်ရေဒီယိုကုထုံး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချပါ။
3.Glutathione သည်အဆိပ်ဖြစ်စေသောဒြပ်ပေါင်းများ၊ လေးလံသောသတ္တုအိုင်းယွန်းများသို့မဟုတ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေသည့်အရာများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်းတို့၏ထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကို acrylonitrile, fluoride, carbon monoxide, heavy သတ္တုနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များ detoxification ဖြင့်ကုသနိုင်သည်။
5.Glutathione သည် acetylcholine နှင့် cholinesterase တို့၏မညီမျှမှုကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မတည့်မှုဆန့်ကျင်ရေးအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။
6. မကြာမီကလေ့လာမှုများအရ glutathione သည်အေအိုင်ဒီအက်စ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတားဆီးနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
၁။ ဂလူးသီနီယမ်သည်ဗီတာမင်စီနှင့်ညီမျှသည်၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်ကလေးအစားအစာများတွင်ပေါင်းထည့်။ တည်ငြိမ်သောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
2. glutathione သည်အရောင်ခြယ်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သောကြောင့်အညိုရောင်ကိုကာကွယ်ရန်စည်သွပ်ဘူးများထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
၃။ Glutathione ကိုလျှော့ချနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အမှုန်များလျှော့ချရန်နှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုအားဖြည့်ရန်ဂျုံမှုန့်များထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။
4. Glutathione ကိုပေါင်မုန့်ထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရောစပ်ရသောအချိန်ကိုတိုစေနိုင်သည်
L-glutamate၊ Nucleic Acid အရသာရှိသောအရာများ (သို့) ၄ င်းအရောအနှောများနှင့်ရောစပ်သောအခါ Glutathione သည်အသားအရသာပြင်းထန်သည်။
Glutathione သည် nucleic acid ကိုဟန့်တားနိုင်ပြီးငါးအချိုမှုန့်အရသာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
6.Glutathione သည်အသား၊ ဒိန်ခဲနှင့်အခြားအစားအစာများတွင်အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
7. ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်သောအစားအစာနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာများကို glutathione ကိုအလုပ်လုပ်သည့်အချက်အဖြစ်ပြင်ဆင်သည်။
1.Glutathione သည် cytotoxic တ္ထုများကိုသန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များတွင်အရေပြားရှိအလွန်လေးသောသတ္တုများနှင့်အဆိပ်အတောက်များကိုဖုန်မှုန့်များဖြင့်ကုသပေးပြီးသက်သာစေသည်။
2.Glutathione သည်အိုမင်းခြင်းကိုခံသော antioxidant ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအခမဲ့အစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးပရိုတိန်းနှင့်အင်ဇိုင်းများ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဓိက radical scavenger ဖြစ်သည်၊ သို့ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် free radical scavenging တုံ့ပြန်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
3.Glutathione သည် transdermal စုပ်ယူခြင်းအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောအဖြူရောင်ဖြူရောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတားဆီးသည်
Melanocytes ၏ဇီဝဓါတုဗေဒလှုပ်ရှားမှုများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ခြယ်ပစ္စည်းဆဲလ်ကနေအဆိပ်အတောက်ပစ္စည်းများကိုပျက်စေရန် Melanin ကနေပါအောက်ဆိုဒ်။
၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌အရောင်ခြယ်ဆဲလ်များကို necrosis နှင့်အသွင်ပြောင်းမှုမှကာကွယ်ပေးသည်။
ရှေ့သို့ ခေတ်မှီကုန်ပစ္စည်းများတရုတ်အရည်အသွေးမြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင် 99% Orlistat CAS 96829-58-2
ခေတ်မီကုန်ပစ္စည်းများတရုတ်အရည်အသွေးမြင့်အလေးချိန် Los ...